Jimmie Åkesson sere nnukwu ìgwè mmadụ na Almedalen | Apg29
Jimmie Åkesson sere nnukwu ìgwè mmadụ na Almedalen
Sweden Democrats otu onye ndú Jimmie Åkesson sere nnukwu ìgwè mmadụ na Almedalen mgbe o kwuru na Saturday n'abalị.
M gere ntị ụfọdụ party ndú Almedalen na m echiche bụ na-ala n'obi ọdịdị ndị a mere ezuru, Jimmie Åkesson, ọ bụ ezie na ya ọzọ pụrụ ịbụ nnukwu mgbe ntuli aka.
Ekpe ekpere ka Chineke
Ọbụna na ndụ TV na-agbasa ozi sere Jimmie Åkesson nnukwu na-ege ntị. Tupu ngosi nke a consignment e kwuru na o kpere ekpere ka Chineke.
Ònye / ihe ga-achị mgbe ntuli aka ke 2018?
M nwere ike na-etinye ajụjụ aha nke party-enweta nkwanye ntuli aka, ma ọ họọrọ na-agaghị eme otú ahụ n'ihi na ọtụtụ mgbe na-egosi na ọ bụ Sweden Democrats. Ma ihe ma ọ bụ onye ga-achị mgbe ntuli aka?
The na-ekwusa Lars Enar si chọrọ ndepụta na a video na Moderates, Christian Democrats na Sweden Democrats ga-achị ọnụ mgbe ntuli aka 2018th
Mgbe o mere nke a video na May anya nnọọ uche na-adịghị si ma mgbe m na Almedalen ugbu a otú ahụ ka m na-adịghị jide ya kwa unbelievable.
Na nzọpụta Jizọs Kraịst
N'ezie, ọ bụghị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịzọpụta. Dị ka m kwuru, gụnyere a film club na a gbara ajụjụ ọnụ m na Almedalen otú Jizọs abụghị a ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma na-nzọputa. Iji-azọpụta - n'ezie zọpụta - i nwere na-anabata Jizọs dị ka Onyenwe anyị.